Corporate Responsibility - MH Thread
လှည်း | ရွာေဖြလမ္းညႊန္
100% polyester အပ်ချုပ် Threads ပတ်ချာလည်
core ပတ်ချာလည်အပ်ချုပ် Threads
texture ချည်ခင် / Overlock Thread
polyester အပ်ချုပ် Thread ၏အသေးစား spool
polyester ပန်းထိုး Threads
ထဲမှာပါတဲ့ Rayon ပန်းထိုး Threads
ပန်းထိုး Threads ၏အသေးစား spool
နိုင်လွန် Thread, ငါးဖမ်းကြိုး
ပုလဲလဲမှို့ Ball ကို
MH Oeko-Tex®Standard100အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်နှင့် "ထိပ်တန်း 500 တရုတ်ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ" နှင့် "AAA ယုံကြည်စိတ်ချကုမ္ပဏီ" အဖြစ်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်၏တိုးတက်မှုနှင့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လည်းဆိုးရွားနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လေကောင်းလေ, ရေ, နှင့်သမုဒ္ဒရာညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း ပို. ပို. လေးနက်ဖြစ်ကြသည်။ MH ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏တာဝန်ကြာပါသည်။
2015 ခုနှစ်, MH သဘာဝဂေဟဗေဒကာကွယ်ရန်နှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများမှာ "အစိမ်းရောင်ခြေရာ" ၏သဘောတရားကိုကျင့်သုံးမှအမ်န်ထမ်းများအပေါ်တောင်းဆိုတစ်ဦး "အစိမ်းရောင်ခြေရာ" သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးလူသိများတဲ့အထည်ချုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်, MH 16 နှစ်ပေါင်းအစိမ်းရောင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျင့်, နှင့်ညစ်ညမ်းမှုထုတ်လွှတ်မှု၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလျှော့ချဖို့ဘယ်လိုလေ့လာရန်ကျူးလွန်, မိလ္လာကုသမှုဓာတ်ခွဲခန်းဆောက်လုပ်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, သေချာစက်ရုံရေဆိုးများနှင့်ကျပ်ခိုးအောင်ထားပြီးအားလုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ။ 2015 MH ခုနှစ်တွင်လည်းအစိမ်းရောင်ထုတ်လုပ်မှုလေ့ကျင့်ဖို့ကုန်ကြမ်းကနေစတင် polyester, စုံလုံအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် polyester နှင့် Better- လဲမှို့-Initiative မှလေးခုအစိမ်းရောင်ဂေဟစနစ်ပန်းစီးရီးပြန်လည်အသုံးပြုသည့် dope ဆေးဆိုး, စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
MH သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုပြီးစီးရန်ဆင်းရဲသောသူသည်ရွာ၌ကလေးငယ်များကူညီရန် "Xiao dou ya" ပညာသင်ဆုရံပုံငွေထူထောင်ခဲ့သည်။ MH ဆယ်နှစ်7ဆင်းရဲသားကလေးငယ်များအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
တိုင်းနွေရာသီ, အမ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်သားဆုကြေးဇူးကိုအအေးပေးပို့နှင့်အသွားအလာ police.MH လိမ့်မည် "အဝတ်အစားသံသရာ" လှုပ်ရှားမှုထောက်ခံပါတယ်, Guizhou ယူနန်ပြည်နယ်နှင့်အခြားဆင်းရဲနွမ်းပါးဒေသများရှိဆင်းရဲသောသူကိုရွာ 10,000pcs အဝတ်အစားကျော်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, MH စေတနာ့ဝန်ထမ်းကလေးတွေနဲ့အတူကစား, Ningbo Enmeier ကလေးများသက်သာချောင်ချိရေးဌာနများတွင်ကလေးများသွားရောက်ကြည့်ရှု, သူတို့လက်ဆောင်များပေးခြင်းပါလိမ့်မယ်။
MH Core တန်ဖိုးများ: ဖောက်သည်အာရုံစိုက်, လုပ်လုပ်ခြင်း, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ, သမာဓိ
MH အမ်ယဉ်ကျေးမှုဖြန့်ဖြူးဖို့ "MH အပတ်စဉ်" အီလက်ထရောနစ်သတင်းစာ, MH APP နှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
MH အမ်ကိုလည်း MH အခမဲ့ဘတ်စကက်ဘောကလပ်, ဘောလုံးကလပ်, ပြင်ပတောင်တက်ကလပ်, ဓာတ်ပုံကလပ်နှင့်အခြားသူများ, စုစုပေါင်းရှစ်ကလပ်ရှိပြီးစသည်တို့ကိုအထူးထိုကဲ့သို့သောနှစ်ပတ်လည်ပါတီအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့ရန်ပုံငွေ, အဖွဲ့ကအဆောက်အဦးလှုပ်ရှားမှု, ဝန်ထမ်းခရီးသွားလုပ်ငန်း, ရှိပါတယ် ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှိခြင်းမှန်ထမ်းများ။
ဝန်ထမ်း '' ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်
MH န်ထမ်းများကကျန်းမာရေးအတွက်အထူးရန်ပုံငွေရှိပါတယ်။ MH ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်ကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အသိပညာရှေ့ဆောင်ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးပွဲ, စီစဉ်အပေါင်းတို့, MH န်ထမ်းမှနှစ်စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲရှိပါတယ်။ အပြင်, MH အဓိကရောဂါသို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရဘေးအန္တရာယ်သူ MH န်ထမ်းများကကူညီပေးဖို့, "ပိုးစုန်းကြူး" ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေထူထောင်ရန်။ အဆိုပါ "ပိုးစုန်းကြူး" နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေအတိတ်2နှစ်များတွင် ပို. ထက်တစ်ဆယ်န်ထမ်းကူညီပေးခဲ့တယ်။
Tel: 0086-574-27766888 ဖက်စ်: 0086-574-27766000
COPYRIGHT © 1999-2019 | NINGBO MH ချည်ခင်ချည်စက်ရုံ။